Coincheck manambara refunds manomboka amin'ny herinandro ambony - Blockchain News
Febroary 9, 2018 Admin
Zavatra cryptocurrency fifanakalozana Coincheck nanambara fa mikasa ny hamela ireo mpampiasa vola ao an-toerana mba hiala amin'ny tantara manaraka Talata.
Izany dia tonga taorian'ny Hack amin'ny Jan. 26, izay nahatonga ny fanakatonana tampoka fanompoana. Coincheck Ary niantso ny valan-dresaka amin'ny izay navela fa 500 NO tapitrisa famantarana (mendrika ny manodidina $533 tapitrisa tamin'ny fotoana) efa nalaina avy amin'ny mpanjifany nomerika iray intruder.
Ao amin'ny filazana nalefa androany, amin'ny vahoaka nanao (tsy ofisialy avy amin'ny fandikan-teny):
“Amin'izao fotoana izao, fananana ny mpanjifa’ Zavatra Yen dia nahavita soa aman-tsara ao anaty andrim-panjakana ara-bola. Dia hanohy indray ny withdrawals isika manomboka Febroary 13, 2018.”
Mpanjifa efa nifikitra tamin'ny vola ny fifanakalozana satria nijaly naoriny ho lalana izay azo inoana fa ny lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny Hack ny cryptocurrency.
Ara-bola ao Japana Watchdog, ny Financial Services Agency (FSA), nilaza tamin 'ny fotoana izay, “Tsy manara-penitra ny rafitra fitantanana ny loza efa lasa ny fenitra amin'ny Coincheck.”
Previous Post:Inona no nitranga tamin'ny Binance Exchange ary rehefa manomboka manao veloma
watch hoy i:
Jona 11, 2018 amin'ny 10:39 AM
Ity tokoa no ilaina, Misaotra.
Grady hoy i:
Aogositra 29, 2018 amin'ny 8:36 AM
Teddy hoy i:
Oktobra 15, 2018 amin'ny 1:52 PM
Mafana: Constantinople has been Delayed! Plus NASA looking into Crypto! [Bitcoin News]